Umhla My Pet » umphezulu 10 Tips for Ukuthandana ngempumelelo
Yintoni ukuthandana yimpumelelo kuthetha? Impendulo yalo mbuzo ixhomekeke phezu imbono yakho ubomi kunye neenjongo olubekele ngokwakho xa uthandana. Kukho abo kulungiselwe bona umhla iphumelela kuphela xa ithe yesango ekuyeni ubudlelwane bexesha elide yaye umtshato. Abanye bakugqala intlekele ukuba ayizange iphele esingqengqelweni. kuba abathile, umhla iqabele xa waba nexesha elihle. Nangona akukho siqinisekiso sokuba macebiso alandelayo aya kujika umhla nganye ibe kwelifu, Ngokuqinisekileyo baya kukunceda ukunciphisa ukuthandana izinga lakho ukusilela.
Mayilungiswe nokulindeleyo ukuba iinjongo zakho
Njengazo naziphi na ezinye iprojekthi kokuba nenxaxheba, nikulindeleyo mntu uthandana okanye ukusuka kumhla ngokwayo malilungiselelwe iinjongo zakho. Ukuba ngaba ufuna olunye-ubusuku-stand, musa sihlolisise iqabane lakho ngokungathi niza ukuba bachithe ubomi bakho naye / wakhe.
Yenza ukhetho abaviwa bakho ukuthandana
Ukuba ufuna ukwandisa yakho lempumelelo, musa uthandana nabani na kubonakala kufumaneka. Sika angabikho kuluhlu ezinokubakho imihla yonke kwabo awunayo into efanayo.
Umhla alikho ithuba ukubonisa ubuchule bakho kumabala. UMthetho ngokwendalo kwaye musa ukuzama ngathi ukuba enye into kunawe ngokwenene, ingakumbi xa ufuna ubudlelwane bexesha elide. Inyaniso iya kuphuma ekugqibeleni kwaye namanye aya Babambeke.
Imihla eziphumeleleyo na osisiyatha, abo nje. Ukuba akukho ngomhla wokuqala abangaboniyo kwaphela, ucinge ngezinto onomdla eqhelekileyo uze unyuke nabanye imisebenzi iimbono bhubhane ukuze isibheno nobabini.
Musa azise ngaphambili kwi ncoko rhoqo yaye ungamnikeli sikhalazela ubudlelwane bakho ayiphumelelanga ibe ngumkhwa. Nangona kubalulekile ukuba amaqabane amabini ukwabelana ngezinto ngemvelaphi yabo, akukho bani ofuna azinakulinganiswa ngokwesikhundla. Ikamva isifundo ubuncwane kwakunye. Musa nize kuyinyusela ngaphandle kokuba uqinisekile ukuba wena kunye neqabane lakho niyathandana belungele ngesihloko eso.
Enoba yintoni na abantu bathi, ngomhla wokuqala usoloko inkangeleko neya- jikelele. ngoko ke, amalungiselelo wena ngokufanelekileyo: kwambatha ezinye abumba, ukunxiba into ukhangela okulungileyo wena uncume. nokuba, musani ukuyeka nokuzikhathalela wena xa ucinga ukuba ubudlelwane.
Gcina unyawo lwakho emhlabeni
Kungakhathaliseki ukuba kakhulu umhla wakho kubonakala, kuhlala yokwenene. Musa ukungena ebhedini, ubuncinane kungekhona ngomhla wokuqala. Musa ukuqala ukuthetha ngayo umtshato nabantwana kuba nje ungathanda imovie efanayo.
Zilungiselele ukuba umhla
amalungiselelo Umhla ayibandakanyi nje kuphela acocekileyo, ukusezela okulungileyo ekhangela smart. Ukuba Besithandana ixesha elide, ucinge ezidlumzi incoko ukuze Ukunqanda umngcipheko mthulise elide kunzi-.
Yiya ngaphaya imbonakalo
Nje ngokuba abantu ngathi smart, unyanisekile yaye enye, oko akuthethi ukuba ngokwenene. Ngaphandle aphakame sokurhanela yonke kwaye wonke, uzame ukukhangela izicuku phandle amaxoki ukuqokelela ulwazi ngokwaneleyo ukuze abe uluvo lobuqu.
Akukhathaliseki ukuba kutheni le ndawo ukuthandana, musani lithemba kwaye ungayibaxi. Ukuthandana bonke abantu ayinyuki amathuba okufikelela. kunye, uya kubonakala kakhulu umdla kakhulu ukuba ezinye kubomi bentlalo ngaphandle ukuthandana.